REPUBLICADAINIK | » म ज्योतिष हैन : उपेन्द्र यादव
म ज्योतिष हैन : उपेन्द्र यादव
– उपेन्द्र यादव, अध्यक्ष, संघीय समाजवादी फोरम नेपाल
आफ्नो मुद्दा र माग सम्बोधनका लागि आफैँ पहल गर्ने हो । हाम्रो मुद्दाका बारेमा हामी छलफलमा छौँ । उहाँहरु को हो र थाहा दिनलाई ? हामी चुनावमा भाग लिदा उहाँहरुले उदण्डता देखाएको होइन । अहिले किन पछिपछि लाग्नुपर्यो ? उदण्डता र उछिरिङखलता मात्रै राजनीति होइन । उहाँहरुमा अनुसाशन छैन, अराजकता छ । चरम जातिवाद छ । व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा बाहेक अरु केही छैन ।
Published : Sunday, 2018 March 4, 10:35 am